မနကျအိပျရာထခြိနျ စပဈြသီးခွောကျရစေိမျရညျကို သောကျရငျ ရရှိမယျ့ အကြိုးကြေးဇူးမြား
HomeKnowledgeမနကျအိပျရာထခြိနျ စပဈြသီးခွောကျရစေိမျရညျကို သောကျရငျ ရရှိမယျ့ အကြိုးကြေးဇူးမြား
H June 21, 2021
စပဈြသီးခွောကျကို ရစေိမျပွီး သောကျတဲ့နညျးဟာ BC 2000 ပတျဝနျးကငျြ ကတညျးက ရှိခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဗီတာမငျ၊ အမြှငျဓာတျ၊ သတ်ထုဓာတျတှကေ စပဈြသီးခွောကျထဲမှာ အမြားကွီး ပါဝငျပါတယျ။ အာဟာရပညာရှငျတှေ ကလညျး စပဈြသီးခွောကျ ရစေိမျရညျကို သောကျဖို့ လူနာတှကေို တိုကျတှနျးပါတယျ။
စပဈြသီးခွောကျကို ရထေဲမှာ တဈညကွာအောငျ စိမျထားရငျ ကနျြးမာရေး အတှကျ အမြားကွီး အကြိုးရှိမှာပါ။ ရထေဲမှာ စပဈြသီးခွောကျရဲ့ သတ်ထုဓာတျတှနေဲ့ အာဟာရဓာတျ ပြျောဝငျသှားပါတယျ။ စပဈြသီးခွောကျရညျရဲ့ အစှမျးက အသားအရကေို လှစပွေီး ကနျြးမာရေးကို ကောငျးစပေါတယျ။
1. အသညျးနဲ့အူမှာ အဆိပျတှေ ကငျးသှားစပေါတယျ။
အိန်ဒိယနိုငျငံက Ayurveda ဆေးနညျးမှာ စပဈြသီးခွောကျ ရစေိမျရညျကို အသညျးနဲ့ အူကို သနျ့စငျဖို့ သုံးခဲ့တာ နှဈပေါငျး မနညျးတော့ ပါဘူး။ စပဈြသီးခွောကျမှာ အငျတီအောကျဆီးဒငျ့နဲ့ အမြှငျဓာတျတှေ ပါဝငျပွီး အဆိပျတှကေို ကငျးစပေါတယျ။
အငျတီအောကျဆီးဒငျ့က အသညျးကို ကောငျးကောငျးအလုပျလုပျစပွေီး အသညျးက အဆိပျတှကေို ဖယျပေးပါတယျ။ အမြှငျဓာတျက အူမကွီးနဲ့ အူထဲကို သနျ့ရှငျးရေး လုပျပေးပါတယျ။ ဗိုကျထဲမှာ ဘာအစာမှ မရှိသေးခငျ စပဈြသီးခွောကျ ရစေိမျရညျကို သောကျပေးရငျ ပိုကောငျးပါတယျ။ စပဈြသီးခွောကျ ရစေိမျရညျကို သောကျပွီးရငျ စပဈြသီးခွောကျ အဖတျတှေ ကိုလညျး ဝါးစားဖို့ မမပေ့ါ နဲ့နျော။
2. ခန်ဓာကိုယျကို စှမျးအငျ မွနျမွနျပွညျ့စပေါတယျ။
အားကစားသမားတှကေ စပဈြသီးခွောကျဟာ စှမျးအငျမွနျမွနျ ပွညျ့စပွေီး အကွာကွီး အားရှိစတေယျလို့ ပွောပါတယျ။ စပဈြသီးခွောကျမှာ အာဟာရဓာတျတှေ ပါပွီးသားဖွဈလို့ သကွားတှေ၊ အခြိုတှေ ထပျထညျ့စရာ မလိုပါဘူး။ စပဈြသီးခွောကျရစေိမျရညျကို မနကျမှာ သောကျရငျ တဈနကေုနျ အားပွညျ့နမှောပါ။ အားကစားမလုပျခငျ အခြိနျတှေ မှာလညျး စပဈြသီးခွောကျရစေိမျရညျကို သောကျပေးလို့ ရပါတယျ။
3. ကိုလကျစထရောကို ကစြပွေီး သှေးဖိအားကို တညျငွိမျစပေါတယျ။
စပဈြသီးခွောကျမှာ ပိုတကျဆီယမျလညျး ပါဝငျပါတယျ။ စပဈြသီးခွောကျ ရစေိမျရညျကို သောကျသူဟာ မသောကျသူထကျ သှေးဖိအား သိသိသာသာ ကတြာကို တှရေ့မှာပါ။ စပဈြသီးခွောကျ ရစေိမျရညျကို နညျးနညျးပဲ သောကျရငျတောငျ ဒီအာနိသငျကို ရမှာပါ။ စပဈြသီးခွောကျ ရစေိမျရညျက ကိုလကျစထရောကို သိသိသာသာ ကစြလေို့ နှလုံးသှေးကွောကဉျြး ရောဂါတှဖွေဈဖို့လညျး ရာခိုငျနှုနျး နညျးသှားမှာပါ။
မနက်အိပ်ရာထချိန် စပျစ်သီးခြောက်ရေစိမ်ရည်ကို သောက်ရင် ရရှိမယ့် အကျိုးကျေးဇူးများ
စပျစ်သီးခြောက်ကို ရေစိမ်ပြီးသောက်တဲ့ နည်းဟာ BC 2000 ပတ်ဝန်းကျင် ကတည်းက ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်၊ အမျှင်ဓာတ်၊ သတ္ထုဓာတ်တွေက စပျစ်သီးခြောက်ထဲမှာ အများကြီး ပါဝင်ပါတယ်။ အာဟာရပညာရှင်တွေ ကလည်း စပျစ်သီးခြောက် ရေစိမ်ရည်ကို သောက်ဖို့ လူနာတွေကို တိုက်တွန်းပါတယ်။
စပျစ်သီးခြောက်ကို ရေထဲမှာ တစ်ညကြာအောင် စိမ်ထားရင် ကျန်းမာရေး အတွက် အများကြီး အကျိုးရှိမှာပါ။ ရေထဲမှာ စပျစ်သီးခြောက်ရဲ့ သတ္ထုဓာတ်တွေနဲ့ အာဟာရဓာတ် ပျော်ဝင်သွားပါတယ်။ စပျစ်သီးခြောက်ရည်ရဲ့ အစွမ်းက အသားအရေကို လှစေပြီး ကျန်းမာရေးကို ကောင်းစေပါတယ်။
1. အသည်းနဲ့အူမှာ အဆိပ်တွေ ကင်းသွားစေပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံက Ayurveda ဆေးနည်းမှာ စပျစ်သီးခြောက် ရေစိမ်ရည်ကို အသည်းနဲ့ အူကို သန့်စင်ဖို့ သုံးခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း မနည်းတော့ ပါဘူး။ စပျစ်သီးခြောက်မှာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်နဲ့ အမျှင်ဓာတ်တွေ ပါဝင်ပြီး အဆိပ်တွေကို ကင်းစေပါတယ်။
အင်တီအောက်ဆီးဒင့်က အသည်းကို ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်စေပြီး အသည်းက အဆိပ်တွေကို ဖယ်ပေးပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ်က အူမကြီးနဲ့ အူထဲကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးပါတယ်။ ဗိုက်ထဲမှာ ဘာအစာမှ မရှိသေးခင် စပျစ်သီးခြောက် ရေစိမ်ရည်ကို သောက်ပေးရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ စပျစ်သီးခြောက်ရေစိမ်ရည်ကို သောက်ပြီးရင် စပျစ်သီးခြောက်အဖတ်တွေ ကိုလည်း ဝါးစားဖို့ မမေ့ပါ နဲ့နော်။
2. ခန္ဓာကိုယ်ကို စွမ်းအင် မြန်မြန်ပြည့်စေပါတယ်။
အားကစားသမားတွေက စပျစ်သီးခြောက်ဟာ စွမ်းအင်မြန်မြန် ပြည့်စေပြီး အကြာကြီး အားရှိစေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ စပျစ်သီးခြောက်မှာ အာဟာရဓာတ်တွေ ပါပြီးသားဖြစ်လို့ သကြားတွေ၊ အချိုတွေ ထပ်ထည့်စရာ မလိုပါဘူး။ စပျစ်သီးခြောက်ရေစိမ်ရည်ကို မနက်မှာ သောက်ရင် တစ်နေကုန် အားပြည့်နေမှာပါ။ အားကစားမလုပ်ခင် အချိန်တွေ မှာလည်း စပျစ်သီးခြောက်ရေစိမ်ရည်ကို သောက်ပေးလို့ ရပါတယ်။
3. ကိုလက်စထရောကို ကျစေပြီး သွေးဖိအားကို တည်ငြိမ်စေပါတယ်။
စပျစ်သီးခြောက်မှာ ပိုတက်ဆီယမ်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ စပျစ်သီးခြောက် ရေစိမ်ရည်ကို သောက်သူဟာ မသောက်သူထက် သွေးဖိအား သိသိသာသာ ကျတာကို တွေ့ရမှာပါ။ စပျစ်သီးခြောက် ရေစိမ်ရည်ကို နည်းနည်းပဲ သောက်ရင်တောင် ဒီအာနိသင်ကို ရမှာပါ။ စပျစ်သီးခြောက် ရေစိမ်ရည်က ကိုလက်စထရောကို သိသိသာသာ ကျစေလို့ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါတွေဖြစ်ဖို့လည်း ရာခိုင်နှုန်းနည်းသွားမှာပါ။